tobacco brown: ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းက ကျွန်မကို ဘဝအကြောင်း သင်ပေးပုံ။ - English-Video.net
tobacco brown - Social artist
tobacco brown | Speaker | TED.com
tobacco brown: ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းက ကျွန်မကို ဘဝအကြောင်း သင်ပေးပုံ။
ပန်းဥယျာဉ်တွေဟာ ကျွန်မတို့ဘဝတွေရဲ့ ကြေးမုံတွေပါလို့ ဆိုသူကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အနုပညာရှင် tobacco brown ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ရဲ့ ပြည့်ဝတဲ့အလှကို ရိတ်သိမ်းနိုင်ဖို့ ၎င်းတို့ကို အထူးဂရုပြုပြီး စိုက်ပျိုးရပါလိမ့်မယ်။ သူမရဲ့ အတွေ့အကြုံကို အရင်းခံပြီး ကမ္ဘာတစ်လွှားက မြို့ကြီးတွေဆီကို အများပြည်သူဆိုင်ရာ အနုပညာ ဖန်တီးမှုတွေကို ဆောင်ကြဉ်းရင်းကနေ brown ဟာ ဥယျာဉ်စိုက်မျိုးခြင်းကနေ ကရုဏာစိတ်၊ ဆက်သွယ်မှုနဲ့ တင့်တယ်တဲ့ ဘဝတွေကို ဖန်တီးခြင်းအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကို သင်ကြား ပေးနိုင်ပုံကို ဖွင့်ထုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။
TED Resident tobacco brown isasocial artist working at the public intersection of environmental art and restorative justice. Full bio
At age four, I foundagarden,
ကျွန်မ အသက် လေးနှစ်မှာ
living underneath the kitchen floor.
It was hiding behind
leftover patches of linoleum
၎င်းဟာ ကျွန်မရဲ့ အမေဖယ်ခိုင်းနေတဲ့
on the worn-out floor
my mother was having removed.
အကြွင်းအကျန် ဖယောင်ပုဆိုး အစအနတွေ
The workman was busy
when the garden caught my attention.
ကျွန်မက ဥယျာဉ်ကို မြင်မိတဲ့အချိန်မှာ
My eyes became glued to the patterns
of embroidered roses
ကျွန်မရဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ ကျွန်မရဲ့
ကလေးဘဝ ရှုခင်းကိုဖြတ်ပြီး ပွင့်နေတဲ့
blooming across my childhood landscape.
I saw them and felt
a sense of joy and adventure.
သူတို့ကို မြင်တော့ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့
စွန့်စားမှု သဘောတစ်ခု ခံစားလိုက်ရတယ်။
This excitement felt like
a feeling to go forward
into something I knew nothing about.
ရှေ့ဆက်ဖို့ ခံစားမှုတစ်ခုလို ခံစားရတယ်။
My passion and connection to garden
started at that exact moment.
ဆက်သွယ်မှုက ဒီအခိုက်မှာမှာပဲ စတင်ခဲ့တယ်။
When spring arrived,
I ran so fast through the house,
အိမ်ကနေ အမေ့ရဲ့ အသံရှေ့ကနေ
speeding ahead of my mother's voice.
I pulled on my red corduroy jumper
and my grey plaid wool hat
အမေ သူ့အနွေးထည် ဝတ်မရခင်လေးမှာ
ကျွန်မရဲ့ အနီရောင်ချည်ကတ္တီပါ အနွေးထည်နဲ့
before my mother could get her jacket on.
I catapulted out of the front screen door
onafresh carpet of grass.
Excited, I bounced to my feet
and flipped three more cartwheels
သူမရဲ့ ဘေးကို မကျခင်လေး
before landing by her side.
Mother dear was in the garden
busy breaking up the soil,
မြေကြီး ပေါက်ရင်း အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။
and I sat beside her,
playing with mud pies in the flower bed.
ပန်းခင်းထဲမှာ ရွှံ့လုံးတွေနဲ့ ကစားနေတယ်။
When her work was done,
she rewarded me with an ice-cold glass
of bittersweet lemonade
ကျွန်မကို ချိုသက်သက် သံပုရာရည်
and then lined my shoes
with sprigs of mint
ပြီးတော့ ​ခြေထောက်တွေ အေးဖို့
ကျွန်မ ဖိနပ်ကို ပူဒီနာခက်တွေ
to cool off my feet.
My mother cooked with the colors
and textures of her garden.
အရောင်တွေ၊ အသားတွေနဲ့ ချက်ပြုတ်ပါတယ်။
She baked yams and squash
သူမဟာ မျောက်ဥနဲ့ ဖရုံ၊
and heirloom tomatoes and carrots.
She fed love toageneration of people
with purple hull peas and greens.
It seems that during my childhood,
the blooms from my mother's gardens
have healed all the way from her halo
အမေ့ဥယျာဉ်ထဲက အပွင့်တွေဟာ သူ့ဆံဖျား
ကနေ ကျွန်မတို့ ခြေဖဝါးရင်းတွေအထိ
to the roots on the soles of our feet.
In our last conversation before her death,
သူမဆုံးခင် ကျွန်မတို့ နောက်ဆုံး
she encouraged me to go
ကျွန်မကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့ ကမ္ဘာထဲက
သွားလို့ ကျွန်မကို အားပေးခဲ့တယ်
Since then, I have planted her gardens
through art installations
in countries of the people that I meet.
Now they lining
parks and courtyards,
အခုတော့ ၎င်းတို့ဟာ ပန်းခြံတွေနဲ့
painted on walls and even
in blighted lots off the street.
နံရံတွေမှာ ဆေးခြယ်ကာ လမ်းနဲ့ဝေးဝေးက
If you were in Berlin, Germany,
သင်ဟာ ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဘာလင်ကဆိုရင်
you would have seen my garden
at Stilwerk Design Center,
Stilwerk Design Center က ကျွန်မရဲ့
where rosemary and lavender,
hydrangea and lemon balm
အဲဒီမှာ ရိုစ်မေရီ၊ လာဗင်ဒါ၊
trailed up the glass elevators
to all six floors.
In 2009, I planted "Philosophers Garden,"
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ "Philosophers Garden"
a garden mural,
blooming at the historic
Tennessee Memphis က သမိုင်းဝင်
Frederick Douglass အထက်တန်းကျောင်းမှာ
This school’s garden
fed an entire community
and was honored by Eleanor Roosevelt
Eleanor Roosevelt က ဂုဏ်ပြုခဲ့တာပါ။
Again, in 2011, I planted
at Court Square Park --
ထပ်ပြီးတော့ ၂၀၁၁ က Court Square Park မှာ
six entry gardens
with 80 varieties
of deliciously fragrant floribunda
နှင်းဆီမျိုးနဲ့ မျိုးစပ် လက်ဖက်နှင်းဆီ
and hybrid tea roses.
အမျိုး ၈၀ ပါတဲ့ အဝင်ပန်းခြံ ခြောက်ခုပါ။
Gardening has taught me
that planting and growingagarden
ဥယျာဉ်စိုက်ခြင်းက ကျွန်မကို သင်ပေးခဲ့တာက
is the same process as creating our lives.
This process of creation
begins in the spring,
when you break up the soil and start anew.
Then it's time to clear out
debris and roots of the winter.
The gardener must then make sure
ဒီအခါမှာ ဥယျာဉ်မှူးဟာ ကောင်းမွန်တဲ့
thatagood disposition
and the proper nutrients
မြေဆီလွာထဲမှာ မှန်ကန်စွာ ရောစပ်ထားတာ
are correctly mixed in the soil.
Then it's important to aerate the topsoil
ဒီနောက်မှာ အပေါ်ယံမြေလွှာ လေသလပ်ပေးပြီး
and leave it loosely packed
You won't get those
beautiful blooms in life
until you first do the work just right.
ဘဝမှာ ဒီလှပတဲ့ အပွင့်တွေရှိပါလိမ့်မယ်။
When our gardens are balanced with care,
we can harvest the beauty
of livingalife of grace.
တင့်တယ်တဲ့ ဘဝတစ်ခု ရှင်သန်ခြင်းရဲ့
when trees realize through their roots
that another tree is sick,
သစ်ပင်တွေဟာ အခြားအပင်တစ်ပင် ဖျားတာသိတဲ့အခါ
they will sendaportion
of their nutrients to that tree
အဲဒီအပင်ဆီကို သူတို့ရဲ့ သြဇာဓာတ်
to help them to heal.
about what will happen to them
(သို့) ဒါလုပ်တဲ့အခါ သူတို့တွေ
or feel vulnerable when they do.
Whenatree is dying,
it releases all of its nutrients
to other trees that need it the most.
သူ့ရဲ့ သြဇာဓာတ်အားလုံးကို အခြာ၊သော
we are all connected by our roots
ကျွန်မတို့ဟာ အမြစ်တွေနဲ့ ဆက်ထာပြီး
and sharing nutrients with each other.
It's only when we come together
that we can honestly grow.
ဒါက ကျွန်မတို့တွေ ရိုးသားစွာ ရှင်သန်တဲ့
It's the same for humans
in the garden of hardship.
when the caterpillar transforms
intoachrysalis,
this involves some struggle.
ဒီမှာ ရုန်းကန်မှု ပါဝင်ပါတယ်။
But it'sachallenge withapurpose.
ဒါပေမဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့ စိန်ခေါ်မှုပါ
Without this painful fight
the confines of the cocoon,
the newly formed butterfly
can't strengthen its wings.
ပုံပေါ်စ လိပ်ပြာလေးဟာ သူ့ရဲ့တောင်ပံတွေ
ထဲမှာ အားမွေးနိင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Without the battle, the butterfly dies
is to illustrate how to integrate
human connectivity into the garden.
ဥယျာဉ်ထဲမှာ လူသားရဲ့ တွယ်ဆက်မှုကို
Gardens are full of magical wisdom
Mother Nature is creative energy
မိခင်သဘာဝဟာ မွေးဖွာဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့
Gardens areamirror
that cast their own reflection
into our waking lives.
So nurture your talents and strengths
ဒီတော့ သင့်ကိုပေးထားသမျှကို အသိအမှတ်ပြုကာ
while you appreciate
all you've been given.
Remain humble to healing.
And maintain compassion for others.
Cultivate your garden for giving
သင့်ဥယျာဉ်ကို ပေးဖို့အတွက် ပျိုးထောင်ပြီး
and plant those seeds for the future.
အနာဂတ်အတွက် ဒီသစ်စေ့တွေ စိုက်ပါ။
နက်ရှိုင်းစွာ ရှင်သန်နေတဲ့ ကမ္ဘာပါ။
tobacco brown: ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းက ကျွန်မကို ဘဝအကြောင်း သင်ပေးပုံ။ | TED Talk | TED.com